Izindaba - Amathiphu wokwehlisa ugesi omile kumajezi
Lapho ufaka futhi ukhumula ijezi, uthintana nabanye, noma uthinta ngephutha izinto zensimbi, ivame ukudedelwa ngokuzumayo. Ungabona ngisho nezinhlansi zikagesi emoyeni. Hhayi izandla zakho kuphela ezizolimala, kepha futhi nogesi omile njalo nokukhishwa kuzothinta umsebenzi wakho nempilo yakho ejwayelekile.
Amajezi athambekele kugesi ongaguquguquki, ngoba isikhumba sethu, ezinye izingubo namajezi kuyathintana futhi kuhlikihlane, ikakhulukazi lapho sigqoka noma sikhumula izingubo, ugesi we-static uyaqoqeka kancane kancane. Lapho iqoqeka ngezinga eliphakeme, izokhishwa konke ngasikhathi sinye, futhi ukukhishwa kuzokwenzeka.
Susa ugesi omile okhiqizwe kwijezi: Ngaphambi kokufaka nokususa ijezi, sebenzisa into eyinsimbi ukuthinta ijezi. Noma gqoka i-brooch yensimbi ukwenza ugesi omile ophethwe ijezi.
Gwema ukugqoka amajezi enziwe ngemicu yamakhemikhali, ngoba ukungqubuzana phakathi kwezintambo zamakhemikhali nomzimba wakho kungenzeka kakhulu ukuthi kukhiqize ugesi omile. Gqoka izicathulo zesikhumba ngaphezu kwezicathulo zenjoloba, ngoba izinto zenjoloba zivimbela ukuqhutshwa kwamacala kagesi, okuholela ekuqongeleleni kwezindleko zikagesi.
Nciphisa ukukhiqizwa kukagesi ongaguquguquki kumajezi: thenga isithambisi noma isifutho sezinwele bese usifafaza kwijezi ukuvimbela ugesi ongaguquguquki. Ngoba isithambisi singakhuphula umswakama wamajezi, futhi ukufafaza izinwele kunganciphisa ugesi omile. Noma sebenzisa ithawula elifafazwe kahle ngamanzi futhi linciphiswe ngamanzi ukusula ijezi. Manzisa ijezi kancane ukunciphisa izinga lokoma kwejezi futhi wehlise ukukhiqizwa kwamandla kagesi.
Thuthukisa indlela yokuwasha amajezi: engeza i-baking soda, uviniga omhlophe noma isithambisi lapho ugeza amajezi. Ingathambisa izingubo, inciphise ukoma kwezinto, futhi isize ekwehliseni ugesi omile.
Khulisa umswakama wendawo ezungezile: Uma isimo sezulu sesomile, imali ekhokhelwa ugesi ayidluliseli kalula emoyeni. Ungasebenzisa i-humidifier ukwandisa umswakama emoyeni, noma ubeke ithawula elimanzi noma ingilazi yamanzi kwi-heater ukuze ube nomphumela ofanayo.
Gcoba isikhumba: Faka amafutha okuthambisa ezindaweni zesikhumba ezihlangana namajezi noma izinwele ezimunca kalula nemichilo yamaphepha emincane. Akukona nje kuphela ukuthi isikhumba singagcinwa ebusika obomile, kepha noma ngabe isikhumba esigcotshisiwe sixhumana nezinto zejezi, akulula ukukhiqiza ugesi omile.
Isikhathi Iposi: May-07-2021